Wariye si xun ugu dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWariye si xun ugu dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
December 4, 2018 Puntland Mirror Somalia, Somalia 0
Wariyaha dhaawacmay Ismaaciil Shiikh Khaliif. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal katirsan booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in wariye uu si xun ugu dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho.
Kabtan Maxamed Xuseen oo katirsan booliiska ayaa wakaalada wararka AP u sheegay in wariye Ismaaciil Shiikh Khaliif oo sidoo kale katirsan ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda warbaahinta, uu ku dhaawacmay kadib markii qarax loogu qariyay gaarigiisa uu ku qarxay degmada Waaberi.
Khaliif ayaa la sheegay in uu si weyn u dhiig baxay haddana lagu dabiibayo isbitaal kuyaala magaalada.
Ma jirto koox si dhaqso ah u sheegatay masuuliyada.
Soomaaliya ayaa kamid ah dalalka ugu khatarta badan wariyeyaasha. Haayada difaacda warbaahinta ee CPJ ayaa sheegtay in 59 wariye lagu dilay gudaha Soomaaliya tan iyo 1991, markaas oo dagaalkii sokeeye uu ka qarxay dalka kuyaala Geeska Afrika.
Wariyeyaasha Soomaaliyeed ayaa si joogta loogu hanjabaa balse ciidanka booliiska ayaa marar dhif ah baaritaan ku sameeya umana difaacaan si ku filan wariyeyaasha.
Somali journalist badly hurt in car bomb blast in Mogadishu
Boosaaso-(Puntland Mirror) Nin ganacsade ahaa ayaa kooxo hubaysan caawa oo Isniin ah fiidkii ku dileen magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen saraakiishu. Waxaa la dhihi jiray ninka dhintay Axmed Xuseen Xasan oo loo yaqaan (Sayidka), sida ay [...]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Talaado ah u safray dalka Jabuuti, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada. Safarka madaxweynaha ayaa ah mid shaqo, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka madaxtooyada. [...]